Maxay yihiin howlaha kaaliyaha maamulku? | Sameynta iyo daraasadaha
Waajibaadka kaaliyaha maamulka
Maite Nicuesa | | Maamulka Guud, Maamulka Deegaanka, Mucaaradka, Maamulka
Ma ogtahay waxa ka shaqooyinka maamulka? Haddii aad hadda ku fikireyso inaad qaadatid tartamada soo socda ee Maamulka Kaaliyaha ah, waa inaad ogaataa waxa shaqooyinkani noqon doonaan oo ay tahay inaad jimicsi sameyso haddii aad ka gudubto imtixaanka oo aad sidaas u shaqeyso.
Shaqadan, oo sidaas darteed, Shaqooyinkooda waa inaan lagu qaldin kuwa Farsamo yaqaanada Maamulka. In kasta oo labaduba ereyga "maamul" xambaarsan yihiin haddana waa laba qaybood oo shaqo oo kala duwan.
1 Waa maxay kaaliyaha maamulka?
2 Maxay qaadataa si loo noqdo kaaliye maamul?
3 Waa maxay farqiga u dhexeeya kaaliyaha maamulka iyo maamulka
3.1 Kaaliyeyaasha maamulka ayaa shaqeeya
3.2 Waajibaadka maamul
4 Intee in le'eg ayuu koorsada kaaliyaha maamulku soconayaa?
5 Immisa maaddo ayaa loo baahan yahay in loo barto imtixaannada kaaliyaha maamulka
Waa maxay kaaliyaha maamulka?
Kaaliyaha maamulka ayaa ah taas Qofka aan inta badan kula kulanno xarumaha gaarka loo leeyahay ama kuwa dadweynaha oo shaqooyinkiisa ugu waaweyn ay la xiriiraan shaqada xafiiska. Laakiin si aad u ogaato si sax ah waxa ay yihiin howlaha maamulka, shaqooyinka, iyo doorarka ay tahay inay qabtaan kaaliyayaasha maamulka, xarumaha dowlada iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, hoos ka aqri.
Maxay qaadataa si loo noqdo kaaliye maamul?
Ogaanshaha dhammaan howlaha ay qabanayaan kaaliyeyaasha maamulka, tani waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato oo aad yeelato:
Baro sida wax loo akhriyo loona qoro, sida iska cad oo loo haysto fikradaha xisaabta aasaasiga ah.
Aqoonta ICT, farsamaynta ereyga iyo / ama xakamaynta kumbuyuutarka.
Si wanaagsan u abaabulan, noqo qaab farsamo taxaddarna ku leh shaqadiisa.
Ogow oo diyaar u noqo shaqeeyaan sidii koox.
Baro sida loo maareeyo qalabka xafiiska caadiga ah, sida nuqul-koobiyeyaasha.
Ha muuqaal quruxsan oo rasmi ah haddii ay qabtaan waajibaadka soo dhaweynta.
Baro sida loo muujiyo a xirfad leh, edeb leh iyo dabeecad saaxiibtinimo.
Ku dadaal si loo dhameystiro howlaha la weydiiyay.
Adiguna, ma u hoggaansantaa wax kasta oo laga codsado kaaliyaha maamulka? Ma kuu cadaatay waxa ay shaqooyinka maamulka Maxaad samayn lahayd haddii aad shaqada hesho? Haddii aad xiisaynayso inaad shaqadan qabato, ka Mucaaradka SAS Adeegga Caafimaadka ee Andalus waxaad fursad weyn u leedahay inaad ku guuleysato.
Waa maxay farqiga u dhexeeya kaaliyaha maamulka iyo maamulka
U diyaargarowga mucaaradka waa caqabad soo food saartay xirfadlayaal badan maanta. Tartanada kiciya xiisaha musharixiin badan ayaa waxaa kamid ah kuwa ku baaqaya in boosaska cusub loo helo kaaliyaha maamulka iyo maamulka In kastoo fikraduhu muuqaal ahaan aad isugu eg yihiin, haddana waa in la caddeeyaa inaysan isku mid ahayn. Marka xigta, waan caddayn doonnaa maxay ku kala duwan yihiin labada muuqaal ee macnaha guud ee mucaarad hore loo soo sheegay.
Shuruudaha lagu galayo imtixaannadu way ku kala duwan yihiin xaalad kasta. Marka laga eego dhinaca aqoonta, resume-kaaliyaha maamulka waa inuu muujiyaa cinwaanka ESO ama u dhigma tan. Maamulka, dhiniciisa, wuxuu u baahan yahay inuu caddeeyo inuu dhameystiray Baccalaureate, ama cinwaankaas oo u dhigma heerkan waxbarasho. Waa in la caddeeyaa in xirfadlayaashu ay yeelan karaan tababar horumarsan, laakiin tani waa diyaarinta lama huraanka ah ee looga baahan yahay xaalad kasta si ay ugu qalanto imtixaannada.
Sida aan ka faallaynay, maamulayaashu waa inay lahaadaan tababar dheeraad ah. Iyo, sidaas darteed, waxay kaloo qabtaan hawlo aad u dhib badan. Labada muuqaalba waxay qabtaan hawlo aad muhiim u ah hawl maalmeedka shirkadda, laakiin dabeecadda boos kasta oo shaqo waa ka duwan tahay. Kaaliyaha maamulka wuxuu qabtaa hawlo farsamo oo dheeri ah oo laxiriirta arintaan.
Maamulka, dhiniciisa, wuxuu hayaa boos mas'uuliyad weyn leh wuxuuna qabtaa hawlaha maamulka maamulka. Iyo natiijada, waxqabadka booska mas'uuliyadda weyn ayaa sidoo kale laga dareemayaa mushahar bille ah oo ka sarreeya ka badan mushaharka kaaliyaha maamulka.
Hoos waxaan ku faahfaahineynaa shaqooyinka mid walba si uu u caddeeyo:
Kaaliyeyaasha maamulka ayaa shaqeeya
Xirfadlahaan ayaa ka jawaaba wicitaanada taleefanka
Samee hawlaha kaydinta
Ku qor qoraallada hingaad taxaddar leh
Ka taxaddar ajendaha maalinta
La shaqee koox ahaan asxaabtaada si aad ula kulanto waqtiyada kama dambaysta ah
Shaqaalahani wuxuu u adeegsadaa barnaamijyo kombiyuutar oo kala duwan ujeeddo wax ku ool ah. Samee hawlaha isgaarsiinta: ha ka jawaabin wicitaannada taleefanka oo keliya laakiin emayl.
Hoos waxaad kaheleysaa liiska hawlaha ugu muhiimsan ee maamulka:
Dukumintiyada soo dhaweynta.
Qaado wicitaanada taleefanka.
Ka qaybgal booqashooyinka.
Samee xisaabinta aasaasiga ah.
Ka warbixi wax kasta oo la xiriira waaxda ay ku tiirsan tahay.
La soco wixii ku saabsan falanqaynta faylasha.
Hayso cusboonaysiinta ajandaha, labadaba taleefanka iyo cinwaanada, iyo kulamada.
Aqoon u leeyahay waaxyaha Maamulka Dadweynaha ee qaybta ay ku tiirsan tahay ay aad ugu xidhan tahay.
Sidoo kale, aqoon u leh maaraynta makiinadaha xafiisyada, min xisaabiyeyaasha illaa nuqulleyda, adoo adeegsanaya kombuyuutarrada gaarka loo leeyahay iyo barnaamijyada kombiyuutarka ee ay soo bandhigaan
Waxay u badan tahay in maalinba maalinta ka dambaysa ay jiri doonaan shaqooyin badan oo ay tahay in loo fuliyo maamul ahaan, hase yeeshee, kuwani waa kuwa ugu wakiilka ah.
Intee in le'eg ayuu koorsada kaaliyaha maamulku soconayaa?
Kaaliyaha maamulka waa xirfadle ku shaqeeya koox ahaan. Oo sidaas darteed, waxay ku lug leedahay sidii loo gaari lahaa ujeeddooyinka laga dhigay xafiiska. Dhammaan howlaha xafiisyada laga qabto waa kuwo khuseeya, xitaa kuwa u muuqda kuwo sahlan in la qabto. Koobi-sameynta, tusaale ahaan, waa shaqo lama huraan ah. Qormadan xirfadeed ayaa mas'uul ka ah hawshan.
Tababarku wuxuu diyaar u yahay xirfadleyda doonaya inay shaqo ka raadsadaan goobtan. Mid ka mid ah safarada aad qiimeyn karto, haddii aad rabto inaad gasho booskan shaqo, waa Wareegga Tababbarka Fasalka Dhexe oo ku takhasusay Maareynta Maamulka. Si loo helo wareeggan, horey, ardaygu waa inuu dhammaystiray barashada Waxbarashada Dugsiga Sare ee Qasabka ah iyo caddee cinwaanka u dhigma, ama mid kale oo u dhigma, oo ku jira taariikh nololeedka manhajka.
Daraasaddan waxay leeyihiin ugu yaraan qiyaastii 2000 saacadood oo waxbarid ah kuwaas oo loo abaabulay laba koorso waxbarasho. Markuu dhammeeyo muddadan tababarka, ardaygu wuxuu leeyahay karti iyo xirfado uu ugu baahan yahay inuu ku fuliyo howlaha shaqadan xafiiska.
Waqtigan xaadirka ah, waxaad ka heli kartaa koorsooyin tababar oo ballaaran oo kaa caawinaya inaad u diyaar garowdo inaad ka shaqeyso kaaliyaha maamulka.
Immisa maaddo ayaa loo baahan yahay in loo barto imtixaannada kaaliyaha maamulka
Marar badan, tani waa mid ka mid ah su'aalaha ay isweydiiyaan kuwa qiimeeya fursadda inay u soo baxaan imtaxaan soo socda. Xaaladdaas, waa inaad barataa manhajka si aad u qaadatid imtixaannada oo aad u hesho dhibco fiican. Waxyaabaha ku jira manhajka waxbarashadu waxay ku dhisan yihiin dhowr fikradood oo muhiim ah. Dhinac, sharciga maamulka, maaliyadda iyo dastuurka. Hawlaha dadweynaha, otomaatiga xafiiska, nidaamka maxalliga ah iyo abaabulka xafiisyada dadweynaha ayaa ah ereyo sidoo kale ku habboon meel ku habboon nuxurka imtixaanka. Si aad uga soo muuqato imtixaannada, waa inaad si taxaddar leh u akhridaa saldhigga wicitaanka.
Guud ahaan, waxaa loogu yeeraa wicitaan halkaasoo macluumaadka la xiriira ajandaha ay ka muuqdaan. Ajandaha waxaa lagu qaabeeyey qaybo kala duwan. Tusaale ahaan, hadda, Ajendaha loogu talagalay Kaaliyaha Maamulka Kaaliyaha Maamulka waxaa loo abaabulaa laba qaybood oo waaweyn iyo kooxo 27 ah.
Si kastaba ha noqotee, tani waa qayb ka mid ah macluumaadka oo isbeddeli kara mar uun, maaddaama aysan jirin hal hay'ad isugu yeerta oo ku dhawaaqda meelaha kaaliyayaasha maamulka. Kala duwanaansho suurtagal ah oo la xiriira su'aashan ayaa dhici kara, iyo sidoo kale cusbooneysiinta qaar laga bilaabo taariikh cayiman. Faa'iidooyinka ay leedahay in la diyaariyo mucaarad iyadoo la kaashanayo akadeemiyada ayaa ah in xirfadleyda xarunta tababarka ay xalliyaan wixii su'aalo ah ee ku saabsan arrintan ama arrin kale.
Waa in la xusuusnaado in maamul keliya uusan jirin. Mucaaradnimada waxaa lagu dejin karaa inta ay le'eg tahay Maamulka Guud ee Gobolka, Is-maamulka iyo kan Maxalliga ah. Sidan oo kale, haddii aad rabto inaad kaaliye ahaan uga shaqeyso xirfaddaada mihnadeed, waxaad noqon kartaa mid u fiirsada wicitaannada laga fulinayo aag kasta. Hawlaha ay boggan ka qabanayso xaalad kasta way ku kala duwanaan kartaa nooc kasta oo maamul ah. Si kastaba ha noqotee, howlaha illaa iyo hadda la taxay ayaa ah kuwa soo noqnoqda dhammaan kiisaska. Dhammaantoodna waxaa lagu daray, sidoo kale, u fiirsashada dadweynaha oo ah hawl lama huraan u ah xafiis maalin kasta ay kaga duwan tahay tii hore.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Mucaaradka » Maamulka » Waajibaadka kaaliyaha maamulka
Hello Carmen, faafaahin wanaagsan b ..laakiin ma sharxi kartaa farqiga u dhexeeya kaaliyaha maamulka iyo maamulka haddii uu jiro mid? muxuuse yahay farsamo yaqaan maamul?
Sidoo kale fadlan, maxaa lagaa doonayaa inaad sameyso si aad u noqoto kaaliye maamul ama maamul?
Aad baad u mahadsantahay iyo salaan
kukita feeryahanka dijo
oiiee waxaan rabaa macluumaad dheeri ah
Ku jawaab kukita boxiadora
nidaamka taranka labka ee qofka wax aqrinaya maskax ahaan
Jawaab EL TolaZZo
Habeen wanaagsan ayaa ah inaan aad u walwalsanahay oo aan seexan kari waayey fekerka ayaa ah inaan bilaabayo waxbarashadda waxaanan u baahanahay inaan ogaado haddii aan barto kaaliyaha maamulka waxaad u baahan tahay inaad ogaato xisaabta taas darteed tan ayaa igu cabsiineysa maxaa yeelay waan hilmaamay majinistaas oo dhan. i qabtay sanad aan qalin jabiyay, fadlan i caawi
Hayso xoogaa boosas fiican ah, si aad ugu dulqaadato madax aan caddaalad ahayn oo eex lahayn, kuwaas oo isku dayaya inay kaa dhaadhiciyaan inaad shaqadooda u qabato, oo lagugu dalaco kaaliye ahaan
Waa maxay stoicism?